About Us - Ningbo HQC ELEKITRONIKA CO., LTD
Ningbo HQC Electronics CO., LTD [HQC®] naorina tao Ningbo ho toy ny mpitarika ao amin'ny voarafitra manokana mpanamboatra Cabling vahaolana ny 20 taona R & D sy ny famokarana traikefa.
HQC vokatra indrindra manarona,
1St , tariby sy Cable Assembly
HDMI tariby, Optic fibre tariby sy ny Patch tady, Lan tariby sy RJ11 / RJ45 Patch tady, DVI tariby, VGA tariby, Display seranan-tsambo tariby, USB 2.0 sy 3.0 telegrama, RCA tariby, S-Video Cables, Fanairana tariby, gazety tariby, Scart tariby, Coaxial tariby, Power tariby, Sata, dB / DC telegrama, fiangonana sy ny maro Cable Connectors sns
2daty Cabinets sy ny Tools
19 "Cabinets, Open racks, Wall tendrombohitra fononteny mahitsy sy ny Cabinets Accessories toy ny tariby fitantanana fisotroana, raikitra na sliding talantalana, Metal Keyboard, naneho na tsy naneho tontonana, Fan tontonana, Network Crimping & manala ny & Punch an fitaovana, Network tariby Mpamantatra, Power distribution sampana (PDU) sns
3RD Faceplate sy ny Installation Accessories
Face lovia, Vato Ifaharan Jack, Patch tontonana, Fibre optic alalan'ny terminal boaty, ODF, LSA Modular, ambonin'ny boaty, ADSL Modem splitter, Distribution boaty, Telephone Accessories, Adapters, Port Connectors, namboarina Cable vokatra sy ny sisa.
1St High toetra sy ny fahaizana Strong
HQC roa lehibe indrindra ao amin'ny Ningbo faladiany famokarana (Orient Rack®) sy Changzhou (Lan comax®), miaraka amin'ny mpiasa maherin'ny 2000 mpandraharaha tsara ofana miaraka amin'ny fitaovana efa mandroso ny teknolojia sy ny fitaovana fitsapana, izay boky lehibe mahavita didy sy miantoka fohy indrindra fe-potoana. HQC misisika foana amin'ny avo lenta miaraka amin'ny fifaninanana indrindra vidiny.
2daty Fanolorana 0 fiampangana fanoloana service
Isika no tompon'andraikitra amin'ny 100% ny vokatra tsara amin'ny fotoana antoka intsony, manome feo rehefa avy-fanompoana fivarotana sy 0 fiampangana haingana fanoloana rafitra. HQC efa foana ny fitandremana ny foto-kevitra "Customer fahafaham-po no faran'ny laharam-pahamehana".
3RD Professional fifandraisana fototra amin'ny mafy R & D traikefa
Tena mino isika fa ny tia ady, manam-pahalalana sy ny vondrona feno no hanolotra anao ny matihanina vokatra sy afa-po vahaolana. Raha toa ka misy hevitra ho an'ny eo an-toerana fangatahana, dia hanome fanampiana injeniera mafy sy azo itokisana torohevitra. HQC varotra dia tsy matihanina amin'ny fantaro-ny fomba, fa koa tena tsara eo amin'ny fanompoana mpanjifa.
4faha Complete rafitra entana
HQC manome ny manontolo Generic isan-karazany ny vokatra Cabling hihaona ny mpanjifa 'fepetra. Eny, mazava ho azy, ny sasany Accessories dia nanome ny niara-niasa tamin'ny orinasa, na izany aza, tsy vokatry ny HQC manolotra tanteraka vokatra amin'ny vidiny ambany indrindra. Miaraka 20 taona tetikasa traikefa ao an-trano sy any ivelany, dia manana mpamatsy mahafeno fepetra tanteraka tamin'ny Accessories sasany, izay toetra dia efa voamarina ao amin'ny tetikasa lehibe maro. Noho izany, fa ny vokatra rehetra, HQC mampanantena ny ambany indrindra vidiny ho an'ny mpanjifa. Tamin'izany fomba izany, na dia kely no mba hankafy ny fanompoana tsara dia tsara toy izany koa amintsika.
Fotsiny dia aza misalasala isoratana ny fepetra, na ny santionany famaritana ny teny nindramina, ary dia hahatakatra ny antony bebe kokoa ny mpanjifa dia misafidy ny hiara-miasa amin'ny HQC. Izany antoka lehibe afaka mamorona fandreseny-fandreseny, ary ianao ho talanjona ny maha samy hafa, fa tsy ara-Pricing azo antoka fa koa amin'ny isan-tsipiriany, matanjaka ara-teknika sy ny fanohanana ny fifandraisana mahomby. Manantena hanorenana raharaham-barotra maharitra fifandraisana sy ny fisakaizana amin 'ny mpiara-miasa rehetra manerana izao tontolo izao.